White Dog Guide Dog: Ahịa, Puppies, Agba dị iche iche & ọdịdị - Reeddịrị
White Siberia Husky nwere ike ịbụ otu n'ime ọtụtụ nkịta na-ahụkarị nke ọma nwere !
Ndị a mara mma mara mma Refeyim mara ndi enyi ha, inyefe ndi nwe ha aka na ngwa ngwa.
Ọ bụghị ihe ijuanya na Siberia Huskies na-ahọrọ 14th nkịta kachasị ewu ewu na America.
Ma gịnị ka ịmara banyere obere White Husky? Kedu ka ha si dị iche na nkịta ndị ọzọ Husky?
Gaa n'ihu Ọgụgụ iji chọpụta ihe ndị ọzọ ...
White Husky Dog ụdị izu
White Husky ụmụ nkịta
Ọnwụ Husky White
White Husky Dị na Anya
Nduzi Nlekọta White Husky
Zụ Otu Nkịta Husky
A hụrụ Husky na Northeast Asia, mbụ ndi Chukchi zụru , a na-eji nkịta a dị ka nkịta na-agba agba.
Ndị Chukchi matakwara na nkịta ndị a mere nnukwu ndị nche na nkịta ibe.
Ihe akaebe mbu nke umu a bidoro n'ihe dika puku afo ato gara aga, na eme ha otu n'ime ụdị nkịta kacha ochie mara mmadu.
White Husky dị ọcha bụ ihe si na nnweta .
Iji nweta White White Alaskan Husky, a ga-azụ nkịta abụọ White Husky ọnụ iji mepụta ụmụ ọcha puppy.
Enwere ike ịzụlite nwa nkịta White Husky site na ndị na-ebu abụọ nke mkpụrụ ndụ na-abaghị uru (ya bụ Huskies ọdịnala na-ebu mkpụrụ ndụ ihe nketa ahụ), ọ bụ ezie na nke a enweghị ike ibute ụmụ nkịta ọcha dị ọcha.
A hụrụ White Fluffy Husky na 1909.
A kpọbatara Huskies na Alaska maka asọmpi egwuregwu mba ofesi. Ọsọ ahụ gụnyere agbụrụ 408 kilomita, nke ndị otu Husky meriri. Site na ebe a gaa n'ihu, Husky bụ onye ama ama na ọdịnala ọdịnala.
N’afọ 1925 nkịta a na-akpọ Togo , na onye nwe ya Lenhard Seppala, bụ ndị ọrụ maka ibuga ọgwụ mgbochi dị mkpa na Nome ebe ọrịa na-egbu egbu malitere.
Mgbe nke a gasịrị, Togo mụrụ nna ọtụtụ akwụkwọ mmiri ma bụrụ ebe a na-ewere dị ka nna nke Huskies ọgbara ọhụrụ na America.
Ndị White Ken Husky na-amata nkịta ndị America.
Mgbe edebara aha otu ahụ na 1930, aha mbụ Husky debara aha bụ ọcha.
Na 1938, ndị Siberia Husky Club nke America guzobere nke dị dị ka netwọk mba nke Siberia Huskies, ma kwado asọmpi nke aka ha gụnyere sledding, agility, biyayya na ihe ndị ọzọ.
Eziokwu na ihe omuma
Nha Mụ nwoke bụ 21-23.5 ″ na ụmụ nwanyị 20-22 ″
Ibu ibu Mụ nwoke bụ 45-60 pound na ụmụ nwanyị 35-50
Afọ ndụ 12-14 afọ
Reeddị Bdị Spitz
Nzube Sled Anam Udeme
Adabara Ndị nwere onwe ha (Ndị di na nwunye, ndị di na nwunye, ezinụlọ)
Agba dị iche iche White dị ọcha
Iwe Independent, ọgụgụ isi, Cheeky, Iguzosi ike n'ihe, Social
Aha ndị ọzọ Siberia White Husky, Chukcha, Artic Husky
Mụtakwuo Banyere Huskies! Download Ntuziaka Nzuzo Nkịta Anyị zuru ezu n'efu .
Agbanyeghị na a na-ahụta ha dị ka obere, nkịta ndị a anaghị enwe ọnụ ahịa dị elu, nwa nkịta White Husky ga-ere ihe ruru $ 500 na $ 1,000 USD.
Huskies bụ nkịta nwere ọgụgụ isi, ma dị ka ndị mmadụ, ha tozuru etozu na ọkwa dịgasị iche.
Ọ bụ ezie na ha dị afọ iri na ụma mgbe ha dị afọ iri na abụọ, omume ha na-etolitekarị n'etiti 1 na 7 afọ.
Nwa nkita, n'ime aka ọnwa iri na abụọ, kwesịrị ito n'etiti 35 na 57 pound dabere na mmekọahụ ha, nne na nna na gburugburu:
Ọnwa 3 17-22lb 17-22lb
Ọnwa isii 33-41lb 26-37lb
Ọnwa 9 39-52lb 33-46lb
12 Ọnwa ole na 44-57lb 35-51lb
White Husky, dị ka Huskies niile, mara maka omume enyi ya na ịhụnanya ya , ike na-adịghị agwụ agwụ na ịnụ ọkụ n'obi maka ndụ.
Ọ dị obere ịhụ White Siberia Husky. Kama, ụdị a na-ebe ákwá iji gwa ndị ọzọ okwu.
Mgbe ike gwụrụ, a maara Huskies ka ọ na-atụrụ ndụ onwe ya site n'ịkwa ákwá ruo ọtụtụ awa ; ihe ị ga-atụle ma ọ bụrụ na ị nwere ndị agbata obi bi nso!
Mgbe ụfọdụ akpọ aha Houdini nke ụdị nkịta , White Alaskan Husky dị ezigbo mma n'ịgbanahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha nọ ebe ha na-achọghị ịbụ.
N'ihi ya, a na-atụ aro ndị nwe ụlọ itinye ogige ụkwụ isii n'akụkụ ogige ha n'enweghị ihe mgbochi iji gbochie nnukwu mgbapụ!
N'ihi ndị Chukchi na-enye ha ohere ịchụ nta n'oge ọnwa ọkọchị, a maara White Husky na ọ nwere nnukwu anụ oriri.
Drivegbọ ha na-adọkpụ, tinyere ikike mgbapụ ha, na-eme ka ọ dị mkpa maka ngere dị ogologo, ebe ha na-agakarị nke dị mkpụmkpụ karịa maka ịchụso squir ma ọ bụ pusi onye agbata obi!
A na-azụ nkịta White Husky ka ọ bụrụ anụmanụ ma n'ihi ya, ha bụ mara na nkịta enyi na enyi .
Ndị nkịta a na-achọ ịmata ihe na-achọkarị ịbụ akụkụ nke ihe a na-ahụkarị ka imi ha nwee nsogbu!
Bredị a bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mmụọ ebumpụta ụwa ha na-akpali ha ịchọ ọnụnọ nke onye nwe ha.
Mgbe a hapụrụ naanị ya ruo ogologo oge, ha nwere ike ibibi ma ọ bụ ọbụna na-enwe nkụda mmụọ na nkewa nchegbu .
Obi dị onye nwe ya ụtọ nke ukwuu, nkịta ndị a maara ihe na-enwekarị ọchị ma nwee mmasị igwu ndị nna ha aghụghọ na-ahụkarị ka ha “na-achị ọchị” na-efu ha.
Ọtụtụ mgbe, nkịta Husky nwere nke ọma na ụmụaka.
Omume egwuregwu ha na ntorobịa ha na-atọ ụmụaka ụtọ, na-agba ume igwu egwu ọtụtụ oge n'ogige.
N'ikwu nke a, ụmụntakịrị ekwesighi ịhapụ ka Husky lekọta ha anya, dịka oge ụfọdụ ha na-echefu nha ha ma na-eme mkpọtụ; nke a jupụtara ebe niile mgbe ha nwere obi ụtọ.
A maara White Fluffy Husky na ọ ga-eme nke ọma ya na nkịta ndị ọzọ .
Site na echiche ike ha, ha na-eme ihe kachasị mma mgbe niile n'ụdị mmadụ ma ọ bụ nkịta ndị ọzọ n'ụlọ. Agbanyeghị, ha anaghị elekọta anụ ụlọ ndị ọzọ anya nke ọma dịka ha nwere mmụọ ebumpụta ụwa siri ike.
Ọ dị mkpa ịchọta ihe dị iche na White Husky na 'Isabella'. Dị ka aha ahụ na-egosi, nkịta ndị a dị ọcha, ebe Isabella nwere ike ịnwe odo ma ọ bụ agba aja aja na uwe ha.
White Husky ga - eto eto buru ibu.
Ná nkezi, ụmụ nwoke nọ n'agbata 21 na 23.5 sentimita ebe ụmụ nwanyị dị ntakịrị karịa, na-eguzo na sentimita 20 ruo 22.
Ọ bụ ezie na ha toro ogologo, ha kwesịkwara ịdabere, na-atụle n'agbata 35 na 60lb.
A na-amata nkịta ndị a n'ụzọ dị mfe site na uwe elu ha abụọ, ntị nwere akụkụ atọ na ahụ dị ogologo.
Ha pere mpe karịa ụmụ nwanne nne ha , Alaskan Malamute.
Husbies Siberia nwere ọdụ na-agbanwe agbanwe nke a na-ahụkarị maka ịgbanye azụ ha.
N'ezie, mgbe ha na-ehi ụra, a na-ahụkarị huskies ka ọ na-agbanye ọdụ ha n'okpuru imi ha a na-akpọ 'Siberia Swirl' .
Anya Huskies nwere ike ịbụ oji ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ, ọ bụghịkwa ihe ọhụrụ nye ha inwe heterochromia (otu anya nke agba ọ bụla).
Ọ bụ ezie na isiokwu a lekwasịrị anya na ụkọ White Husky, ụdị a na-abịa n'ọtụtụ agba dị iche iche gụnyere:
Uhie na White
Agba ntụ na-acha ọcha
Na incredibly ụkọ “Agouti” uwe
Ọtụtụ pooches nwere ụdị ntụpọ piebald, agbanyeghị na AKC matara agba niile.
Edere maka akwa mkpuchi ya nke abụọ, White Siberian Husky nwere akwa mkpuchi na uwe dị mkpụmkpụ.
Emere uwe ahụ iji kpuchie nkịta n'oge oge oyi ma na-egosipụta anyanwụ n'oge ọkọchị.
White Husky nkịta na-akụ afọ, nke pụtara na ha na-enwu enwu na afọ ahụ dum.
Ugboro abụọ kwa afọ, Husky ga-afụ uwe ha, na-awụfu uwe ime ha ma na-eto na uwe ọhụrụ. N'ime oge a, ntancha bụ ihe achọrọ kwa ụbọchị, mana na mpụga oge ha ga-ekpofu ha, ha ga-ehichacha otu ugboro kwa izu.
Uwe mkpuchi Husky na-emezigharị nke ọma maka ịchịkwa ọnọdụ okpomọkụ yana yabụ ịkpụcha akwa ha adịghị mkpa. Agbanyeghị, nhicha nke ntị ha, ịlele anya ha na ịkpụcha mbọ dị mkpa.
Ọ bụ ezie na ọ mara mma, White Husky abughi lapdog .
N'eziokwu, ha chọrọ mkpakọrịta na mmekọrịta ọnụ, ma ha chọrọ mkpali dị ukwuu, ma n'uche ma n'ahụ. N'ihi ya, ha kachasị mma maka ụlọ ndị nwere ndị nwe ha nwere ike ijide mkpa ha.
Nkịta a adịghịkwa eme nke ọma idebe ya na obere ụlọ ya mere onye nwe ya nwere ohere maka ya iji na-agagharị na ebe dị nchebe.
Nduzi Calorie 1,200
Kedu ihe na mgbe ị ga-eri nri White Husky dị ezigbo mkpa.
Ọ dị mkpa ka ị ghara inye nkịta nri tupu emega ahụ. Kwesịrị inye ha nri awa abụọ tupu ha emega ahụ ka ha wee ghara imega ahụ na afọ zuru oke n’ihi na nke a nwere ike ibute nsogbu gbasara nri dị ka nsị nke afọ .
Dị ka o kwesịrị, ndị Huskies kwesịrị iri nri abụọ dị obere n'ụbọchị karịa nke otu nnukwu nri. Ihe ọ bụla ndị nwe ha họọrọ ịzụ ya, ọ ga-aha nha iko atọ nke nri kpọrọ nkụ kwa ụbọchị.
Ọtụtụ ndị nwe Husky kwadoro a ọkpụkpụ na nri nri nri maka nkịta ha .
N'ihi ebumpụta ụwa nke ịchụ nta anụ ahụ, a kwenyere na nke a bụ nri kachasị mma maka White Husky.
Agbanyeghị, nkịta Husky nwere ike ime nke ọma na kibble dị elu kwa.
Nkeji Nkeji 90+
White Husky na-ahụkarị ndị hụrụ ụdị a n'anya maka ike ha na-adịghị agwụ agwụ.
N'ebe a ka ị na-agba kilomita na kilomita kwa ụbọchị, ụdị a nwere mmasị ịnọ n'èzí ma na-agagharị!
N'ihi ya, anyị na-akwado ihe omume 90 nke mmega ahụ kwa ụbọchị.
Dị ka o kwesịrị, a ga-ekewa ụzọ abụọ nkeji iri anọ na ise, yana ọtụtụ echiche uche dị n'etiti.
Huskies anaghị amasị igwu mmiri. Ọ bụ ezie na ha nwere ike ịnụ ụtọ ịga ije n'ụsọ osimiri ma ọ bụ itinye mkpịsị ụkwụ ha n'ime ọdọ mmiri doggie, ha abụghị ndị na-egwu mmiri nke ọma ma n'ihi ya ị nwere ike ịchọrọ izere njem ụbọchị gaa n'ọdọ mmiri.
Gbalịa iwere White Husky trekking ma ọ bụ na-agba ọsọ kama, nke a ga-abụ ọtụtụ ihe na-amasị ha.
Cheta, ha nwere nnukwu anụ oriri ha, yabụ na ọ ga-esiri gị ike icheta ha n'oge ihe mberede. N'ihi ya, iji ogologo ọzụzụ leash nwere ike ịba uru iji nye ụlọ canine gị ịchọpụta mana ka inye gị njikwa.
Ndiaye na-arụ ọrụ nkịta ma n'ihi ya nwere ọgụgụ isi ma na-achọ ime ihe na-atọ ụtọ.
N'ihi nzụlite ha na-arụ ọrụ, White Siberia Husky maara na ọ nwere usoro isi ike.
Ahapụla ndidi gị ma tie mkpu.
Nkịta ndị a maara ihe nwere ogologo ncheta na iguzosi ike n'ihe nye ndị nwe ha ya mere ihe ịrịba ama ọ bụla nke ịkpa ike ga-efunahụ ntụkwasị obi ha.
Kama, gbalịa ịgba White White gị ume site na ịkwụghachi ụgwọ omume ịchọrọ ịhụ na ileghara ndị ị na-emeghị anya.
N'ime oge dị mkpirikpi, canines ndị a ga-amalite ịmụ ma kpụzie omume ha ka ha daba.
A maara White Husky ịbụ ezigbo nkịta.
Ná nkezi, ha biri ihe dịka afọ 12 ruo 14, mana enwere akụkọ banyere ha dị ndụ karịa ndị okenye.
Ọnọdụ ahụike abụọ ahụ metụtara Siberia White Husky bụ ọrịa akwụkwụ na anya.
Ha abụọ bụ ndị mkpụrụ ndụ ihe nketa yabụ na ọ nwere ike ịlele maka mkpụrụ ndụ ihe nketa dị na nne na nna tupu ịzụ nwa ma ọ bụ zụta nwa nkita.
N'agbanyeghị na ha buru ibu, ọ bụ ihe a na-adịghị ahụkebe na Huskies ịzụlite dysplasia hip.
Nke a apụtaghị na ọ gaghị ekwe omume, mana akụkọ sitere n'aka Orthopedic Foundation for Animals na akụkọ 2008 Huskies nọ na ala iri maka hip dysplasia (naanị 2% nke canines ndị a na-ebu mkpụrụ ndụ ihe nketa).
Dịka e kwuru na mbụ, a na-ele Togo Husky anya dị ka nna nke American Husky.
Nke a na - eme ka ịzụ ụmụ nwee ohere pụrụ iche ebe ọ bụ na o mewo ka ọdọ mmiri ahụ belata; mara dị ka nchoputa mmetụta .
N'ihi ajị dị ọcha ha, White Husky nwekwara nsogbu ịbụ onye ntị chiri. Mkpụrụ ndụ na-enweta ikike nke na-ekwupụta ajị anụ ọcha ha na-ebute kwa mkpụrụ ndụ maka ntị chiri .
White Husky bụ nkịta nwere obi ụtọ, nweere onwe ya ma na-egwuri egwu.
Ha hụrụ ụlọ ọrụ nke ụmụ mmadụ ha hụrụ n'anya n'anya ma nweere onwe ha ihe ọ bụla karịa ijegharị ije ogologo wee soro egwuregwu na afọ rubs.
Nnukwu nhọrọ maka ndị nwe ụlọ nwere ahụmahụ ma na-arụsi ọrụ ike na-achọ ihe ịma aka ọhụrụ ha na-eme nke ọma n'ọtụtụ ụlọ na mkpali!
Ha anaghị eme nke ọma na gburugburu ebe ha nọ na obere ụlọ ma yabụ ịnye ha ohere ịgagharị dị mkpa.
You nwere ọmarịcha White Husky n'ụlọ? You na-eche inweta otu? Mee ka anyị mata echiche gị banyere ụdị amamiihe a na-ekwu.
Onye Belgian Malinois Nduzi zuru ezu: 6 Ga-aguta Eziokwu
Ugwu Nkịta Umengwụ: 20 Nkịta Na-elekọta Nlekọta Maka Ndị Ọrụ
shih tzu yorkie mix nwa
pitbull chihuahua mix zuru toro
German onye ọzụzụ atụrụ blue imi pitbull mix
olulu ehi mix na rottweiler niile oji
German Shepherd pitbull mix ọzụzụ
jack Russell Terrier na chihuahua